Osaneni olusanda kuzalwa ngemva ukukhala lokuqala izinkomba ebalulekile yentuthuko ubude nesisindo. Emazingeni ahlukahlukeneko wendlela ukuphila kwengane has spurt ukukhula, Ngakolunye uhlangothi, recessions. Kodwa izinto eziphawuleka kakhulu - onyakeni wokuqala, lapho usana lukhula ngokushesha kakhulu, futhi kule nkathi kungenzeka ukuba yahlulele isimo sempilo yakhe.
Ukukhula njengoba inkomba eyinhloko impilo ngokomzimba wengane
Ubude nesisindo - lezi ayizikhombisi ejwayelekile ebonisa ukuthuthukiswa kahle umntwana. Yabo fixed ngokushesha nje ngemva kokuzalwa bese ulandela bandisa umsebenzi wabo kulo impilo yengane. Isisindo kuyinto inkomba, yentfutfuko avumelanayo ingane. Kodwa ukukhula ibonisa izinga ukuthuthukiswa ngokomzimba.
Okulandelayo ngesilinganiso ukwanda ubude umzimba ukuvumela ukuthola kwezinso abanempilo womntwana. iziyaluyalu Ukhombe ezifana retardation ukukhula, ubuhlobo inharmonious phakathi ubude nesisindo, ngokuvamile izimpawu lokuqala isifo esingamahlalakhona. Ngokuhamba kwesikhathi ukuthola kuqala lesi sifo futhi babanikeze ukwelashwa ngesikhathi esifanele, kubalulekile ukuqapha izibalo ukukhula.
Ukukhula izingane 1 unyaka
Njengomthetho, ukuzalwa ekukhulisweni kwengane kuba 46 kuya 56 cm. Ngonyaka wokuqala wokuphila ukwandisa ubude umzimba wayo kukhona njalo okuthile. nyangazonke anyuswe Amazinga kukhonjiswa ku Table.
Ingane (1 unyaka): ukukhula zanyanga zonke
Ukwanda ukukhula ngenyanga edlule, bheka
Ukwanda jikelele ekukhuleni, cm
Ithebula ubonisa ukuthi ingane ikhula mayelana 25 cm. Lona ephakeme kakhulu ngena ngakho iDemo isikhathi empilweni yami ezinyangeni zokuqala ezingu-12. Okulandelayo ukwanda okusheshayo e ubude umzimba kungabonakala nasemkhakheni kuphela nokuthomba.
Nezinga lokukhula ngonyaka wokuqala wokuphila
Qinisekisa ukuthi ingane ethuthuka kahle, nodokotela bezingane kanye abazali bazisiza ukuba imithetho ezikhethekile ezasungulwa ngu -World Health Organization (WHO). Ngigcine izinkomba ejwayelekile abangu yabukezwa ngo 2006. UBANI amazinga for abafana namantombazane ngokwehlukana athuthukile, ngenxa izici yentuthuko yabo.
tilinganiso enyakeni 1 abafana
Ubudala e izinyanga
Kukhula ingane ngonyaka 1 (bheka). Boys
Esikhathini uhla evamile
49,9 ± 1.9
54,7 ± 1.9
58,4 ± 2.0
61,4 ± 2.0
63,9 ± 2.1
65,9 ± 2.1
67,6 ± 2.2
69,2 ± 2.2
70,6 ± 2.2
72,0 ± 2.3
73,3 ± 2.3
74,5 ± 2.3
75,7 ± 2.4
Idatha sethulwa ukunikeza ulwazi olunzulu on ukuthuthukiswa abafana. Umehluko emzimbeni obuphelele ezinganeni of abesilisa nabesifazane ezahlukene sobala lapho ufunda ithebula.
Izinga sokukhula amantombazane enyakeni 1
Ukukhula izingane 1 unyaka (bheka). amantombazane
49,1 ± 1.8
53,7 ± 1.9
57,1 ± 2.0
59,8 ± 2.1
62,1 ± 2.2
64,0 ± 2.2
65,7 ± 2.3
67,3 ± 2.3
68,7 ± 2.3
70,1 ± 2.4
71,5 ± 2.5
72,8 ± 2.5
74,0 ± 2.6
Njengoba amathebula edatha, abafana bazalwa kancane ephakeme kunaleyo amantombazane. Le ndlela iqhubeka kuze nokuthomba. Ngalesi sikhathi, intombazane is distilled ekukhuleni. Emthethweni esizayo kubuyiselwa, amadoda ngokuvamile kunabo abesifazane.
Njengoba ingane ikhula ngokushesha ngemva konyaka owodwa?
Ngokushesha ingane ikhula kuphela onyakeni wokuqala wokuphila kwakhe. Khona-ke izinga ukwanda ehlile ubude umzimba wakhe. Kukhula ingane ngemuva konyaka o-1 ngeke ukwandisa ngokuphazima kweso, futhi ngezinye izikhathi kuzuba: iminyaka 5-6 e amantombazane iminyaka 11-13 ubudala, abafana 13-15 iminyaka.
Nezinga lokukhula namanje agcinwe emva kancane lokuqala ngosuku lokuzalwa, kodwa ke kancane kancane kuze nokuthomba. Ngokwesibonelo, ukukhula kwengane eminyakeni 1.5, uma kuqhathaniswa nengane oneminyaka engaphezu kuka-6 cm, kuze iminyaka 2 ke kukhuphuke ngo esilinganayo. Khona-ke, izingane eminyakeni engu-3 ubudala zisekhona ephakeme kunaleyo 6 cm. Khona-ke abanye obuphelele guys umzimba kuzokhulisa ukulandela indlela ethile yokuma noma esithubeni nje. Ngokwesilinganiso, ngaphambi kokuqala usakhula, izingane niyozenezelelwa 4-6 cm ngonyaka.
Yini ekukhuleni kwengane kuxhomeke?
On ukukhula izinyane nomthelela nezici ezithile. Ezinye zazo yilezi saphakade futhi ngeke kushintshwe, ezifana ufuzo. Abanye ziyahlukahluka. Nge efanele kanye nangosizo olufika ngesikhathi yanikeza olunye kungenzeka ukunikeza sokukhula kwengane obunobunye.
Oholela izici ezithinta ukwanda womntwana umzimba obuphelele:
indawo yokuhlala kanye nobuzwe.
Kukhula izingane ngonyaka 1 ixhomeke kakhulu amandla. irisidi ezinganele kwezakhi kuyimbangela eyinhloko ukubambezeleka nentuthuko yengane. Lokhu kusebenza kokubili ubude umzimba nesisindo umntwana. Ibele kumele zithathe amanyathelo ukwandisa inani ubisi, kungenjalo ukuqeda yokudla Izingxube.
iziyaluyalu Ukukhula izingane
Ukwehluleka in izinga wokukhuphuka womntwana umzimba obuphelele ixhunyaniswe singenele ozokusebenzisa. Le nkinga zingelashwa ngesikhathi endocrinology. Kodwa kukhona yizifo ezihlobene nokungabikho kwezinso kumaseli zofuzo. Lokhu kwenza kuvele igama isifo, asilapheki: gigantism futhi kukobana iba yifitjhani khulu.
Esimweni sokuqala, umzimba ingane ukhiqiza esiningi ngokweqile ozokusebenzisa, okwesibili - enganele. Ukukhula izingane 1 unyaka sengezwe ngokuhambisana nemithetho, bese Kutholwe ukwehluleka. Gigantism lapho kungabonwa kudala njengoba engu-5, lapho ukubhasha komzimba - cishe iminyaka emibili.
Isikhathi esichithwe uphethwe ivumela ukuhlola ezingeni yentuthuko ngokomzimba futhi sithathe izinyathelo ukubhekana izifo siyachazwa. Uma ngonyaka wokuphila wesibili ingane izokwengeza esingaphansi 5 cm ngonyaka ke kubalulekile ukuba ikhale alamu bese sithatha izinyathelo ezifanele.
Abazali kufanele ungakhathazeki uma kwalokho izinkomba e ubude nesisindo izinyanga ezimbalwa kuyoba siphambuke kuyinsakavukela. Njalo ingane - ubuntu, ekuhloleni isimo sempilo yakhe ngokuvamile, kubalulekile ukucabangela hhayi kuphela amathebula edatha, kodwa futhi ezinye izici ezithinta ukwanda ubude isidumbu sengane.